महिलाको सुन्दरतामा मात्र होइन समुन्द्र शास्त्रमा पनि निक्कै महत्व छ नाभीको । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार मानिसको बोली चाली र ब्यबहारबाट समेत थाहा नपाएको कुरा नाभीबाट थाहा हुन्छ ।समुद्रशास्त्रका अनुसार जुन स्त्रीको नाभी लामो र अनियमित हुन्छ त्यस्ता स्त्रीमा आत्म विश्वास बढी हुन्छ । यस्ता स्त्रीहरु.....
से -क्स महिला–पुरुष दुबैका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । से /क्ससँग स-म्बन्धित थुप्रै अनुसन्धानहरु प्रकाशित पनि भइसकेका छन् ।अनुसन्धानले नै महिलाले भन्दा पुरुषहरुले से’- क्सको बारेमा बढि सोच्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तैमा महिलाहरुको से- -क्स व्य’व-हार स/म्बन्धि अर्को एउटा सर्वेक्षण गरिएको छ जसका अनुसार ६.....
धेरै वर्षपछि आज आज अचानक भेट हुँदा कृष्ण र कुमार असाध्यै खुसी भए। अप्रत्यासित भेटले उनीहरुको मानसपटलमा बाल्यकाल चल्मलाउन थाले।बाल्यकालको साथी कृष्ण अमेरिकाबाट पिएचडी सकेर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक भएको खबर सुनेर कुमारका आँखा खुसीले रसाए। ‘घरपरिवारको बोझले थिचिएर धेरै पढ्न सकिनँ’, कुमारले कृष्णसँग.....
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । विशेष गरेर महिलाहरूका अं-ग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक न्यूज पोर्टलका अनुसार महिलाको छा-ती, कम्मर र उसको पछाडिको भाग (कम्मरभन्दा मुनि) लाई धेरैले नजर लगाउने गरेको पाइन्छ । महिलाहरूले पनि आफूलाई सुन्दर देखाउन ती.....
पो र्न ह बमा नेपाली किशोरी पनि यस्तो अवस्थामा देखिन थाले
भायनेट कम्युनिकेसमा देशका अब्बल इन्जिनियरहरु कार्यरत छन् । तर, त्यही कम्पनीमा केही महिनाअघि ह्याकरले आ क्र’म’ण गरे । ह्याकरहरुले सो कम्पनीका सबै ग्राहकहरुको विवरण सामाजिक सञ्जालमै सार्र्वजनिक गरिदिए । यसमा ठूला ह्या-कर समूहको संलग्नताको आशंका गरिएको थियो । तर, प्रहरी अनुस-न्धानमा फरक देखियो । बुटवलका.....
मृत्युअघि सुशान्तले आफ्नै हातले लेखेको चिट्ठी सार्वजनिक, पढेर भावुक बने फ्यान !
बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको निधनको ७ महिना पुगिसकेको छ । तर उनको निधनको खास बास्ताविकत अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । हालै सुशान्तकी बहिनी श्वेता सिंह कीर्तिले सोशल मिडियामार्फत् सुशान्तले हातले लेखेको एक चिट्ठी सार्वजनिक गरेकी छिन् । ‘मलाई लाग्छ कि मैले जिन्दगीको ३० साल खर्च गरें । पहिले.....
सुन्दर युवतीलाई देख्दा साथ यी ७ कुरामा पुगिहाल्छ पुरूषको आँखा !
काठमाडौँ- कुनै पनि महिला पुरुष एक अर्काप्रति आकर्षित हुनु सामान्य मानिन्छ । कुनै पनि पुरुषहरुले पहिलो पटक महिलालाई भेट्दा के कुरामा ध्यान दिन्छन् भन्ने हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं । पहिलोः पुरुषहरुले युवतीको ओठमा ध्यान दिने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । कारण यदि युवती हाँसीरहेकी छ भने युवकले.....
अध्ययनअनुसार महिलाहरुले केही कुरा सधै गोप्य नै राख्ने गरेको पाइएको छ । ती के के हुन धेरलाइ थाहा हुदैन । गोप्य कुराको नजिकका साथी र श्रीमानलाइ समेत थाहा हुदैन । - एक महिलाले अर्की महिलाको डाहा गर्दछन् तर पुरुषलाई यो थाहा हुदैनकी एक महिलाले अर्की महिलालाई मन पराउछन् । उनीहरुले अर्की महिलाको सौन्दर्य स्टाइललाई.....
प्रकृतिले महिला र पुरुषको शरीरमा जन्मदै भिन्नता दिएको हुन्छ । यसलाई चाहेर पनि मानिसले परिवर्तन गर्न सक्दैन, हुन त विज्ञानले केही चमनत्कार गरेर लिं-ग परिवर्तन पनि गरेका छन तर त्यसले प्रकृतिक धेरै चुनौती दिन सकेको छैन । विशेष गरेर महिलाहरूका अं-ग पुरुषका भन्दा आकर्षक हुन्छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने एक.....